Ezempilo, Ukuhlinzwa kwePlastiki
Wonke umuntu ufuna ukukhangisa ngaphandle, ukuphumelela, ukuzethemba. Bobabili amadoda nabesifazane bafuna ukuthanda. Kungokwemvelo. Ngakho-ke, imizamo yokuqala yokuvuselela ukubukeka komuntu nokwenza kube ngcono kakhulu yenziwa ngisho nangaphambi kwesikhathi sethu.
I-Ekaterinburg: umtholampilo wokuhlinzwa epulasitiki
Kusukela ngaleso sikhathi, ukuhlinzekwa kwe-esthétique sekufinyelele ezindaweni ezingakaze zenziwe. Ngenxa yokuvela kobuchwepheshe obusha embonini yezimonyo, umuthi wepulasitiki wenza izibonakaliso zangempela. E-Russian Federation, le ndawo yokuhlinzwa iye yavela futhi yafinyelela ezingeni leYurophu, ikakhulukazi esikhungweni samasiko e-Ekaterinburg. Umtholampilo ukuhlinzekwa kwepulasitiki kwesikhungo sokuphatha kanye nendawo sinezimo zakamuva zesevisi yobuciko. Isebenzisa ochwepheshe bangempela emkhakheni we-aesthetics. Bangabizwa ngaphandle kokwedlulisela phambili abadali abakha ubuciko. Phela, akukho lutho olungcono kunazo zonke emhlabeni kunokunikeza ithemba lomuntu onesiphephelo nethuba lokuphila ngaphandle kokufiphaza kwansukuzonke kokukhubazeka noma ukucasha izingxenye ezithile zomzimba.
Iyini ukuhlinzwa kweplastiki?
Isigaba sokuhlinzeka, okugxilwe ekuhlinzekeni okuhlinzekwa ukuqeda noma yikuphi ukukhubazeka okubukeka noma ukulungiswa kobuso nomzimba we-orientation orientation, kubizwa ngokuthi ukuhlinzwa kweplastiki. Ukuhlinzwa kwePlastiki kuhlale kulinganisela ekupheleni kwesayensi nobuciko. Ngemuva kwakho konke, ngaphandle kokuqala, okwesibili, futhi ngokufanayo, akunakwenzeka. Namuhla, le ndawo ihlanganisa izifundo ezimbili - ukuvuselela nokuhleleka. Isiqondiso sokuqala sihlanganisa imisebenzi yokubuyisela ubuqotho besimo somzimba, futhi okwesibili - ukufeza ukubukeka okukhangayo, ukukhululwa kokukhubazeka okungenacala noma okutholakele, ukulungiswa kwezinkinga ezihlobene nobudala. Yingakho ukuhlinzwa kweplastiki kudinga kusuka kudokotela ulwazi olunzulu emkhakheni we-histology, i-physiology, i-microsurgery, i-morphology, njll.
Imisebenzi ethandwa kakhulu besilisa nabesifazane emkhakheni wokuhlinzwa kweplastiki
Izinhlobo zamaplastiki ezithandwa kakhulu futhi ezifunwa kakhulu phakathi kwengxenyekazi yabesifazane zibandakanya: i-breast plasty (mammoplasty), ukulungiswa kobuso, iso, impumulo kanye ne-shape contours (liposuction), ukususwa kwe-wart. Amadoda angase abuyele kuma- plastiki emakhaleni noma ezindlebeni, ukususwa kwe-gynecomastia.
Lezi zinqubo zivumela ukuba unqume ngokuphelele ukucindezeleka. Ukuze uthole ukunakekelwa okusezingeni eliphezulu ngaphandle kokubeka ingozi empilweni, yiza edolobheni elihle laseYekaterinburg. Umtholampilo wokuhlinzwa epulasitiki yisikhungo esikhulu sezokwelapha, Odokotela kuphela abanolwazi nabachwepheshe abaqeqeshiwe kakhulu abasebenza.
Ukunwebeka, amabele amahle namakhulu - lokhu kuyinkomba yabesifazane abaningi. Ngakho-ke namuhla i-mammoplasty ingenye yezinhlobo ezidume kakhulu zomuthi wokuzijabulisa. Ingasetshenziselwa ukwandisa ivolumu yesifuba, ukuqeda i-asymmetry yezigulane ze-mammary, ukulungisa ingono kanye ne-areola, ukuma kwesifuba noma ukutakula ngemva kokukhulelwa, ukudla nokunciphisa.
Imphumelelo yanamuhla emkhakheni wokuhlinzwa kwepulasitiki yenza ukuba i-mammoplasty iphephe ngokuphelele, kepha ukuze ugweme ukubonakaliswa okungalungile, kuyadingeka ukuba uhlole ngokugcwele ngaphambi kwenqubo (ultrasound, mammography, njll), thola ukubonisana kwe-mammologist bese udlulisa ukuhlolwa okudingekayo.
I-Mammoplasty ingenziwa ngezindlela ezimbili, ezibekwa udokotela, kuye ngokuthi yilophi icala. Owokuqala ukusebenzisa izicubu zakho, okwesibili - ekufakweni ngaphansi kwemisipha, izigqoko zezimpande ezikhethekile. Ukusebenza kwenziwa ngaphansi kwe-anesthesia yendawo yamahora amabili. Izikhwama emva kwe-mammoplasty cishe zingabonakali, futhi ekugcineni ziyoncibilika ngaphandle kwesidingo sokulungiswa okungeziwe.
Ukuhlinzwa kwePlastiki: izintengo
Izindleko zemithi yokwenza ubuciko zixhomeke ekuqeqesheni abasebenzi, ububanzi nezinga lezinsizakalo ezinikeziwe, ukutholakala kwemishini yesimanje yokugcina i-endoscopic kanye ne-laser, ukuphumelela kwezindlela namathuluzi okuzithokozisa asetshenzisiwe, nokuphepha kwemisebenzi eyenziwe. Ngakho-ke, izikhungo zokwelashwa ezivunyelwe kuphela kufanele zikhethwe, isibonelo, Isikhungo Sokuhlinza Nge-Plastic (Ekaterinburg). Ngokuphathelene nenqubomgomo yentengo, izindleko, isibonelo, imisebenzi yokukhuliswa kwebele izoxhomeka ekubunjweni kokufakelwa, izinto ezenziwe kuyo, izinga lokugcwalisa i-gel. Ngakho, intengo ingahluka kusuka kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-20 kuya ku-45. Kucezu elingu-1. Izindleko ezigcwele zokuhlinzekwa kokunakekelwa kwebele, kufaka phakathi ukuhlolwa okudingekayo, izimila, ukuhlala esibhedlela kuyahlukahluka kusuka kuma-ruble ayizinkulungwane eziyi-100 kuya ku-300.
Uma ungazi ukuthi ngumuphi umuzi ongcono ukukhetha umtholampilo, kufanele uqaphele izikhungo zokuphatha ngenethiwekhi ethuthukile yokunakekelwa kwezempilo, ukutholakala kwezinhlangano zezokwelapha. I-Yekaterinburg iyafaneleka kulezi zimingcele. Umtholampilo wokuhlinzwa epulasitiki uzokunika ukuzethemba, esikhathini esizayo futhi ukwanelise izifiso zanoma yiliphi, ngisho neklayenti elidinga kakhulu.
I-Mammaplasty noma i-breast augmentation
I-ultrasonic liposuction: impendulo mayelana nokuklama kwakhe, ngani?
Ukuhlinzwa Kweplastiki: Kaminsky Edgar
Inselo yenkomo namazambane - isidlo esihle kumuntu othandekayo
"Impophoma" (Baratynsky): umlando indalo, ukuhlaziywa
Yenkomo ngamakhowe - zokupheka zokupheka
Nauseam - Iyini? Meaning of igama elithi "aba bushelelezi '